The 14 Zuva Keto Challenge chirongwa chitsva chekudya chakagadzirwa nemunyori anotengesa zvakanyanya uye CISSN akasimbiswa wezvehutano Joel Marion. Iyo ndeimwe yeakanyanya kusarudzika ketogenic based diet zvirongwa zvaunogona kuwana online. Ichi chirongwa nyowani chekudya chichagonesa muviri wako nekuchichinja kuita mafuta anopisa muchina mukati memasvondo maviri. Iri zano nyowani rinodzora kudyiwa kwemakabohydrate uye rinowedzera huwandu hwemafuta ane hushamwari mumuviri wemunhu. Pane iri zano nyowani iwe uchadzidza nezve rakakosha boka re "super mafuta" uye kuti aya mafuta achakubatsira sei iwe kudurura yakawandisa mapaundi mune mashoma seanenge mazuva gumi nemana. Zvimwe zveizvi zvinonzi "mafuta akawandisa" zvinosanganisira zvido zvakadai sebhekoni, bota, nyama yakatsvuka ine mafuta, nemazai emazai. Iyi nyowani yezuva regumi nemana dambudziko haina chekuita naAtkins uye haina kusiyana zvachose neyakajairwa ketogenic chirongwa chekudya.
Chikafu cheketo chikafu chinotungamira kuchikamu chinonzi ketosis. Ketosis inzvimbo yemetaboli inoratidzirwa nematanho akakwidzwa emitumbi yemaketone mumatumbu emuviri. Nekuderedza zvakanyanya carb yako, uye kutsiva aya carbs nerudzi rwakakodzera rwemafuta ane hushamwari, chikafu cheketo chikafu chinomanikidza muviri wako kuburitsa maketoni emafuta izvo zvinoita kuti muviri wako unyatsopisa mafuta esimba. Zvinonzwika zvakanaka handiti? Zvakanaka pane chikuru chakakanganisika pane izvi… uye chiri chinhu vanhu vanotanga kunetseka nezvacho vasati vatanga chirongwa cheketo chekudya. Yayo inonzi Keto flu.
Iyo keto flu izwi rinoshandiswa kurondedzera mafuru-kunge zviratidzo zvine chekuita nekutanga iyo yakaderera-carb ketogenic yakavakirwa chirongwa chekudya. Neketo flu, munhu anogona kusangana nenyaya dzakakomba dzinosanganisira kushaya hope, kuzvimbirwa, nyaya dzekugaya, kutemwa nemusoro, kuneta kwemhasuru, uye kushomeka kwemamineral. Iine iyo 14 Zuva Keto Challenge haufanire kunetseka nezve kubata nenjodzi dzinobatanidzwa nefuru yeKeto. Chimwe chinokanganisa chikafu cheketo chikafu ndechekuti dzimwe nguva zvinogona kutora kusvika kumwedzi kuti munhu apinde "yechokwadi" ketosis. Kunyangwe kana nechimwe chikonzero muviri wako uchikwanisa kupinda ketosis muvhiki, nyaya hombe kunze kweiyo keto flu ndeyekuti chirongwa cheketo chetsika hachichinjiki uye hazviite kuva mune yekusingaperi ketosis kwenguva refu. Kunze kwekusave kwechokwadi, mamiriro ekugara ketosis haina hutano kumuviri wako kwenguva refu.
Iyo 14 Zuva Keto Dambudziko chirongwa chekudya ndiyo mhinduro yakanakisa kune echinyakare keto kudya. Muviri wako unenge uchikwanisa kuburitsa ketoni, uye hausi kuzopfuura ketosis. Hongu, iwe wakazvinzwa izvo ... .iwe ucharamba uchigamuchira ALL yezvishamiso zvinoshamisa zvemuviri wako unobudisa ketoni PASINA chaizvoizvo uri muchokwadi ketosis.
Pane echinyakare keto chirongwa chekudya, iwe metabolism unogona kutanga kudzikira mukati me7-10 mazuva nekuda kwekushayikwa kweshuga kubva kusadya carbs. Izvi zvinobva zvakonzera matambudziko kumahormone ayo anokonzera kupisa mafuta. Mhinduro kudambudziko iri inosanganisira kudya "keto carbs" panguva dzakakodzera. Izvi zvakafukidzwa zvakazara zvizere mu14 Day Keto Dambudziko chirongwa chekudya! Nechirongwa ichi chekudya, iwe uchafukura chokwadi nezvekuti "keto carbs" inogona kuenzanisa & kugadzirisa mahormone ako kuti akwanise uye zvakanaka kupisa mafuta.
Iwe unofanirwa kudya keto yakavakirwa makabhohaidhiretsi kuti uchengetedze uye nekuvandudza yako metabolism. Mimwe yemabhenefiti ekushandisa iyi gumi nemana keto dambudziko inosanganisira:
- Muviri wemushandisi uchanyatso kupisa iyo yakawandisa glucose inowanikwa mumahydrohydrate. Izvi zvinobvumira chiropa kutanga chirongwa chekugadzira ketoni patsva.
- Iwo mahormone emafuta emudumbu aka ako cortisol mazinga anotanga kudonha.
- Iyo yakarongedzwa zvakanaka thyroid gland (iyi inokonzeresa yako metabolism)
- Kuwedzera kwesimba maseru
- Hapanazve kubata nekutadza kutarisa
- Kunatsiridzwa kweiyo insulin mazinga ayo anozotungamira kudzikira kwemafuta mumuviri
- Iyi keto yakavakirwa dhayeti system haina keto flu iyo yakasarudzika keto dhayeti vashandisi vanoona. Iwe unozogona kunakidzwa neshanduko nyowani mumuviri wako pasina zvinokuvadza "keto mhedzisiro"
- Kudya kwacho kunoita kuti muviri uchinje mafuta akachengetwa kuita simba. Kuputsika kwemafuta hakuzoiti kuburikidza neketosis maitiro.
- Iyo yegumi nemana keto chinetso chikafu chinokutendera iwe kuti udye uye unakirwe nekudya kwako kwaunofarira. Iwe haufanire kuzvidzivirira kubva kune yakakwira carb chikafu kana muviri wako uri muchikamu chekugadzira ketone.
- Iwe unozogona kunakidzwa neyako ese aunofarira mafuta maprotein sosi sekureba sekunge iwe uchinge wacheka chaiyo nyama
- Unogona kunakirwa neyaunofarira yepamusoro carb chikafu chero bedzi iwe uchisanganisira "keto carbs". Izvi zvinosanganisira kudya michero zvakare! Iwe, zvisinei uchazoda kuziva nguva yakakodzera yekudya izvi zvekudya kuti uvandudze mafuta ako ekupisa kugona chinova chinhu icho kosi iyi inovhara zvizere.
- Iri 14 zuva keto yakavakirwa chirongwa haina kwenguva yakareba mhedzisiro iyo inogona kudzora kugona kwako. Izvi zvakasiyana neyechinyakare keto chikafu chine yakawanda mhedzisiro mhedzisiro.
- Iri zano rinokubatsira iwe kuwana mhasuru yakaonda
- Unogona kudhawunirodha iri gwaro ipapo sezvo richiwanikwa muPDF fomati kuti utange ipapo ipapo
- Unogona kunakidzwa nedoro rako raunofarira nekudzivirira madoro anowedzera kuchengetera mafuta uye ane shuga yakawandisa. Ichi chirongwa chemazuva gumi nemana chinoratidzira kuti ndedzipi zvinwiwa zvinodhaka zvaunogona kunwa
- Nyore kushandisa nekuda kwayo "yakanangwa keto nzira"
- Unogona kunakidzwa nekubata kwako kwaunofarira kamwe pasvondo pasina kuwana mafuta kana iwe uchinge wanyatsonzwisisa kuti iyi nzira yakanangwa neketo inoshanda sei
- Iri zano riri nyore kutevera kwenguva refu uye rinosanganisira zvicherwa, zvinovaka muviri, uye zvigadzirwa zvinodzivirira kushomeka kunojairika mune yakajairwa keto chikafu
- Kana iwe usina kugutsikana munzira ipi neipi iyi 14 Day Dhivhosi inouya iyo izere 60 zuva rekudzoserwa mari garandi saka hauna chaucharasikirwa!
Tinofunga kuti chirongwa ichi chakanaka uye ndicho chakanakisisa chemuviri wako kwenguva refu. Kana wakanga uchironga kuenda keto chero nguva pfupi, iva nechokwadi chokuti chengetedza iyi 14 Day Keto Challenge kutanga nekuti inouya nenjodzi shoma uye ichiri kuvimbisa mibairo! Kana iwe ukahodha nhasi unowana kunyange 4 YEMAHARA bhonasi zvipo neako odha! Iwe uchagamuchira ma4 eBooks anosanganisira anoverengerwa gwara, keto zvinwiwa uye hacks, cheat sheet sheet, uye iyo yepakati yekutsanya bharani.